နိုင်ငံတဝှမ်း ဗုံးဖောက်ခွဲမှု စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် သတင်းစာရှင်းလင်း
ဗုံးဖောက်ခွဲမှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လ ၁၈ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ရုံးတွင် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်စဉ်
RFA သတင်းထောက် ကိုမျိုးဇော်ကိုကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက ဗုံးထောင် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေ ပိုမိုဝင်ရောက်လာမှာကို မလိုလားတာအပြင် တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ လာရောက်လုပ်ကိုင်မှာကို မလိုလားတာကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ဖမ်းဆီးရမိထားသူတွေက ထွက်ဆိုခဲ့တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဇော်ဝင်းက ဒီနေ့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှာကျင်းပတဲ့ ဗုံးဖေါက်ခွဲမူတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဇော်ဝင်းက အခုလို ပြောခဲ့တာပါ။
“လက်ရှိဖော်ထုတ်ချက်တွေအရတော့ သူ့ရဲ့အကျိုးအကြောင်းလေးကတော့ တစ်အချက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းတွေ တိုးချဲ့လာတာကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်၊ နှစ်အချက်ကတော့ တိုင်းရင်းသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့နေရာတွေမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ တိုးမလာအောင် ကာကွယ်တားဆီးထားတာကို သွားတွေ့ရတယ်၊ ဖော်ထုတ်ချက် အရတော့ ဒီလောက်ပဲ အဆင်သင့်ဖြစ်ထားတယ်”
ဒါ့အပြင် သမ္မတရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်ကလည်း ဗုံးပေါက်ကွဲခဲ့မှုတွေကြောင့် အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေအကြား ကြိုးပမ်းနေတဲ့ အပစ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ပျက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေထဲကတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုစောမြင့်လွင်ဟာ အရင်က ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အခုဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေဟာ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနဲ့ ပတ်သက်မှုမရှိဘူးလို့လည်း ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က ပြောပါတယ်။
“ ဒီဖြစ်ရပ်အပါအဝင်ပေ့ါနော် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်က ဘယ်လိုမှရပ်တန့်သွားစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီ၊ တစ်ဖက်က ဆွေးနွေးနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များကလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးကို မရရအောင်တည်ဆောက်မယ်၊ ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါအတိုင်း သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိပြီးသား၊ ကျွန်တော်တို့ လက်ရှိညှိနေတာက နည်းနာပိုင်းပေါ့နော်၊ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ အကောင်အထည်ဖော်တဲ့အပိုင်းပဲညှိနေတာ ရည်ရွယ်ချက်က အတူတူပဲဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်မို့ ဘယ်လိုစိန်ခေါ်မှုပဲရှိရှိ၊ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်”
ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းစတဲ့မြို့တွေမှာ စုစုပေါင်း ဗုံး ၁ဝ လုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၆ ကြိမ်ပေါက်ကွဲခဲ့တာကြောင့် လူ ၂ ဦးသေဆုံးပြီး ၄ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ဒီနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က ဗုံးဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူူ ၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသလို စစ်ဆေးမှုတွေ ဆက်လက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဇော်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြောင်း RFA သတင်းထောက် ကိုကျော်သူ သတင်းပေးပို့ထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ RFA သတင်းထောက် ကိုမျိုးဇော်ကိုကို ဦးတင်အောင်ခိုင်က ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ RFA ရုံးချုပ်ကနေ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
တောင်သူတွေကို USAID ကူညီမယ်
လှေစီးဒုက္ခသည်တွေရဲ့ အသက်ကိုကယ်ဖို့ အမေရိကန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တိုက်တွန်း
၆ ပွင့်ဆိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် မလွှဲမသွေဖော်ဆောင်ရလိမ့် မယ်လို့ သူရဦးရွှေမန်း ပြောကြား
က ဝယ်လာတာလားဆိုတာ ခွဲခြားလို့ မရဘူးလား။
Oct 21, 2013 01:21 AM
I have many doubts on the supporters of the former military government.. These bombings did not happen during the military rule. These people want to discredit U Thein Sein governmet I think so that the army can come back to rule the nation.
Oct 19, 2013 12:04 PM
ဗုံးခွဲ / တွေ့ရှိနေရာ = ဘုရား ၊ ဟိုတယ်
ဗုံးကင်းလွတ်နေရာ = တရုတ် / ထိုင်း စတဲ့နိုင်ငံခြားစီမံကိန်းနေရာ ၊ ဦးပိုင်နဲ့ ခရိုနီများအပိုင်စားနယ်မြေ
ကောက်ချက် = အဖျက်လုပ်ငန်းမဟုတ် ၊ ခြောက်လှန့်ဖို့ သက်သက် ။
Oct 18, 2013 11:28 PM
ဦးနေဝင်းသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်က သူ့မြေးတွေရဲ့ စကော်ပီယံအဖွဲ့က ဘယ်သူ့ကိုမှ ထီမထင်ခဲ့သလိုပါပဲ
၊ ခုလုပ်ရပ်တွေဟာ ဘာလုပ်လုပ် ဘာမှမဖြစ်နိုင်တဲ့သူ (သို့မဟုတ်) “အုပ်စု” ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။